Ambongadiny roa tone kapiteny siny seza Atsimbadiho ny sambo Seat Manufacturing sy Factory |XGEAR
Ny seza kapitenin-tsambo Xgear dia vita amin'ny vinyl 28oz UV tsara indrindra vita amin'ny mari-pahaizana an-dranomasina, manana ergonomika tsara indrindra sy curve tonga lafatra izay natao hifanaraka tanteraka amin'ny contour ny vatanao.
Ny seza siny sambo miaraka amin'ny foam avo lenta, fametahana vy tsy misy pentina ary lamosina plastika henjana, mba hahafahany manome fanohanana ambony indrindra, ary ny bolster flip-up dia afaka manampy ny haavon'ny seza mba hanomezana izay ilainao bebe kokoa.
● Fitaovana: ny seza sambo kapiteny dia vita amin'ny tsara indrindra 28oz UV-tsaboina an-dranomasina-grade vinyl amin'ny avo-density foam padding, ny matevina seza sy lamosina cushions manome mampino fampiononana.Ny entona sy ny fitaovana dia vita amin'ny anodized-aluminium.
● Rehefa mipetraka ianao, dia afaka mahazo fanohanana faran'izay tsara indrindra amin'ny endrika ergonomika tonga lafatra.
● Fasteners vy tsy misy fiatraikany sy ny fiatraikany lehibe rotational bobongolo seza seza rafitra
● Miaraha miasa amin'ny lamina 5"x 5" na 5"x 12" manerantany, misy visy sy mpanasa lamba.
● Ny bolster Flip-up dia afaka manampy ny haavon'ny seza mifanaraka amin'ny filanao samihafa.Noho izany dia azonao atao ny manitsy na manana backrest ambany na ambony backrest.
● Maina haingana ary mora diovina ny seza misy sambo fanjonoana.
Toetoetra Flip-up bolster
lafiny 23.5" H x 26" D x 20.5" W
Lanja seza 9.3KG
Haben'ny baoritra 24.5” W x 27” D x 21.5” H
CartonGross Weight 10.9KG
Manoro hevitra izahay mba tsy hampiasa vokatra etsy ambany mba hanadiovana ny atitany sambo misy vinyl.
● Ny tavoahangy na ny fitoeran-javatra dia milaza hoe “Tsy azo ampiasaina amin'ny vinyl” toy ny Formula 409 sy Turtle Wax/Tar Remover, ny hafa toa an'i Goo B Gone, Murphy's Oil Soap, Simple Green, DC Plus, Orange 88 Degreaser, Son-of-a-Gun , Bleach/Baking Soda, Harbour Mate, Roll-Off na fanadiovana manimba hafa.
● AZA mampiasa solitany, lasantsy na acetone, satria mety hanala ny akanjo ambony an-dranomasina.
● AZA mampiasa vokatra vita amin'ny silicone na solika.Na hesoriny ny plastika ao amin'ny vinyl, avela ho mafy sy mora vaky, amin'ny farany dia mety ho triatra.
Ny seza kapitenin-tsambo dia efa misy lavaka bolt ary ny Mounting dia manara-penitra tsara, ny visy fametahana dia tafiditra ao anatin'ilay fitaovana ihany koa.
Azonao atao ny manitsy na manana lamosina ambany na lamosina avo amin'ny alàlan'ny fifehezana ny bolster Flip-up.
teo aloha: XGEAR 2 ao amin'ny 1 Seza efitra fisakafoana azo aforitra miaraka amin'ny latabatra azo esorina ho an'ny tora-pasika fanjonoana sy picnics.
Manaraka: XGEAR Pop Up mora mametraka 6 lafiny Hub Screen House / Canopy
Seza sambo fanjonoana ambany lamosina
Seza sambon-tsambo avo misy lamosina azo aforitra
Seza sambo ambany aoriana azo aforitra ho an'ny jono sy boa...